सरसफाइ अभियन्ता साहको दृष्टिमा वागमती सफाइ महाअभियान - WASHKhabar
सरसफाइ अभियन्ता साहको दृष्टिमा वागमती सफाइ महाअभियान
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार १८:२५ 629 पटक हेरिएको
नेपालको पहिचान एवं गरिमा हो बागमती नदी । बागमती नदीको पवित्रता लाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास मध्येको एक पहल बागमती साप्ताहिक सफाइ महाअभियान हो । अभियानको निरन्तरताका लागि सम्पूर्ण सरसफाइ अभियन्ताले पु९याएको निःस्वार्थ योगदानलाई एक सरसफाइ अभियन्ताको हेतुले सारा अभियन्ताहरु प्रति आजको दिन उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
बागमती सफाइ महाअभियान सात बर्ष पूरा गरेर आठौं बर्षको आफ्नो पुनित यात्रा शुरू गर्दैछ । सफा, सुन्दर एवं बागमतीको पानी पिउन योग्य नहुनुञ्जेल सम्म सरसफाइ अभियानको अटुट निरन्तरताको लागि शुभकामना सँगसँगै सहकार्यको बाचा पनि गर्दछु ।
आजको दिन दर्जनौं सरसफाइ अभियान देशभरि चल्दैछ । कोही पनि अभियान संस्थागत नभइ बागमती सरसफाइ अभियान जस्तै देशभरिको अभियान सबैको साझा एबम् संयुक्त नेतृत्व भएको अभियान होस् हामी आशा र प्रयासरत छौं । फोहोर नदी खोला, सफा र सुन्दर बनाउन मात्र अभियानको थालनी गर्नु पर्छ भन्ने सोंच होइन । सफा र सुन्दर खोला नदीलाई पनि फोहोर हुन नदिनका लागि सरसफाइ अभियानको आवश्यकता भएको महसुस हामीले गरेको छौं ।
सरसफाइ अभियान प्रतिको समाजको गलत अवधारणालाई हामी आफ्नो सत्कर्मबाट कम गर्न प्रयास गरेका छौं । त्यही मध्ये एउटा गलत अबधारणा समाजको विभिन्न क्षेत्रमा गएको हो कि सरसफाइ मात्र गर्ने दिन शनिवार हो, अभियान शनिवार नि बिहानको समयमा हुनुपर्छ त्यसको अन्तको लागि पनि हामी सहकार्य गर्दैछौं । देशमा आजको दिन सम्म हप्ताको सातौं दिन र विभिन्न समयमा कतै दुई घण्टा त कतै एक घण्टा सरसफाइ राष्ट्रको लागि हुँदैछ । यो एउटा सकारात्मक प्रयास हुँदैछ ।
सरसफाइ अभियानबाट नेपाललाई सफा र सुन्दर बनाउन एउटा ऐतिहासिक कार्यको लागि हामी सबै लाग्नुपर्ने बेला यही हो । ६ देखि ७ बर्षको यात्राको बीचमा दक्षिण एसियाको पहिलो खुला दिसामुक्त देश भएको नेपाललाई पूर्ण सरसफाइयुक्त राष्ट्रको श्रेणीमा विश्व पटलमा ल्याउन सरसफाइ अभियान मिलको पत्थर साबित होला ।
मेरो व्यक्तिगत जीवनमा सरसफाइ अभियान प्रतिको बढ्दै गएको अभिरुचि र लगावको मुख्य प्रेरणा सरसफाइको पहिलो पाइला खुल्ला दिशामुक्त अभियान सिरहा हो ।
बागमती सरसफाइ अभियान धेरैको लागि प्रेरणा भए पनि मेरो लागि प्रेरणाको श्रोत भएन । तर बागमती सरसफाइ अभियानको पैटर्नले मलाई ऊर्जा दिएकै हो । बागमती सरसफाइ अभियानको सातौं बर्षसम्मको निरन्तरताले सैकडौं संघ संस्थाहरुको साझा अभियान हुन सफल भएको सबैले महसुस गरेको छ । चलन चल्तीमा कुनै सामाजिक कार्य गर्न पदाधिकारीको जम्बो टोली या कम्तीमा संयोजक नभए सामाजिक कार्य सफल र लामो समय सम्म हुन सक्दैन भन्ने खालको नेपाली मानसिक विकृतिको अन्तको लागि पनि यो अभियान एउटा उदाहरण भएको छ, सामूहिक नेतृत्वका कारण । बागमती सरसफाइ अभियान कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी या संस्थाको आदेशमा हुँदै आएको होइन सामूहिक नेतृत्वमा सञ्चालन भएको हो । बागमतीको सामूहिक नेतृत्व र बिना संस्था दर्ता भएर सामाजिक कार्य गर्ने पैटर्न मलाई मन परेको हो र मलाई कार्य गर्न ऊर्जा दिएको हो ।
अबको दिनमा खोला नदी नाला भित्र सरसफाइको दूरगामी प्रभावको लागि खोला क्षेत्रको सरसफाइ अभियानको आवश्यकता हामी महसुस गर्दैछौं । अभियानमा आधा भन्दा बढी अवधिको सहभागिताको लागि महिला एबम बालबालिकाको पहलको प्रयास पनि हामी गर्दैछौं ।
आजको दिनमा नेपाललाई पूर्ण सरसफाइयुक्त राष्ट्र बनाउन नदी खोला संग सँगै सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर, हस्पिटल, जंगलको हाईवे साइड, निकुञ्ज, रेलवे ट्रैक क्षेत्र, एयरपोर्ट क्षेत्र, नेपालको प्रवेशद्वार सिमा नाका, भन्सार क्षेत्र जस्ता ठाउँहरुमा पनि सरसफाइ अभियानको शुरुवात भएको छ । हाम्रा यी अभियानहरु विभिन्न देशको लागि एउटा उदाहरण र प्रेरणा बनेको छ ।
बागमती सफाइ महाअभियानले मलाई आफ्नो ३ सय हप्ताको बिशेष कार्यक्रममा दिएको सम्मानको लागि सदैव आभारी रहिरहनेछु । अहिलेको समयमा कोरोनाको विश्व महामारीको प्रकोपलाई झेल्दैछ । कोरोनाले मानिसलाई व्यक्तिगत सरसफाइप्रति पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान दिन सफल भएको छ । आशा गरौं छिट्टै हामी कोरोना महामारीसँगको जीत हांसिल गर्न सफल हुनेछौं । सामान्य जीवन यापन गर्दै विश्वलाई सफा सुन्दर बनाउने अभियानलाई तीव्र पार्ने एउटा पात्रको रूपमा उभिने अठोट गर्दछु ।
जय बागमती ! जय सरसफाइ !!